कला संस्कृति :लहै गुराँसले सुहाउँछ नेपाली चेलीलाई ! - Purwanchal Daily
लहै गुराँसले सुहाउँछ नेपाली चेलीलाई । साँच्चै गुराँसले सुहाउँछ नेपाली चेलीलाई । जेठीलाई हुन् या माइलीलाई, साइँलीलाई हुन् या काइँलीलाई, अन्तरीलाई हुन् या जन्तरीलाई, खन्तरीलाई हुन् या मन्तरीलाई या कान्छीलाई नै किन नहुन् सुहाउँछ गुराँसले सबैलाई । तराईकी चेली हुन् या पहाडकी या हिमालकी उनीहरुलाई गुराँसले सुहाउँछ । गुराँस शीरमा सिउरिउन् या केशराशीमा । चौबन्दी चोलीमा सिउरिउन् या पछ्यौरीमा, चुँदरीमा सिउरिउन् या चुन्नीमा । लहै गुराँसले सुहाउँछ नेपाली चेलीलाई । कानमा सिउरउन् या हात बोकुन्, लहै गुराँसले सुहाउँछ नेपाली चेलीलाई ।
गुराँस प्रकृतिको यस्तो सिर्जना हो जो नेपालमा मात्र पाइन्छ । लाग्छ प्रकृतिले नेपाली चेलीहरुका लागि रचना गरेको हो गुराँस । गुराँसले नेपाली चेलीहरुको सौन्दर्य यसरी खुल्दछ की जसरी निलो आकाशमा सेता–सेता बादलका सौन्दर्य खुल्दछन् । जसरी रातमा ताराहरुका अनि जुनका सौन्दर्य खुल्दछन् । गुराँस धर्तीकै अद्भूत रचना हो । नेपाली चेलीहरुलाई अरु कुनै कुरा चाहिन्न मात्र शीरमा गुराँस सिउरे पुग्छ । लहै गुराँसले सुहाउँछ नेपाली चेलीलाई ।
लहै झरनाले नुहाउँछ नेपाली चेलीलाई । साँच्चै हो झरनाले नुहाउँछ नेपाली चेलीलाई । नेपालका सुन्दर र रमणीय स्थानहरुका कञ्चन पानीको शीतल झरनाले नुहाउँछ नेपाली चेलीलाई । हिमालका कापबाट हुन् या पहाडका चेपबाट छङ्छङ् झर्ने झरना नेपाली चेलीहरुकै लागि सिर्जना भएका हुन् । तीनै झरनाका शीतल पानी बग्दै तराईका मैदानका खोला अनि पोखरीमा पुग्दछन् । त्यही निर्मल पानीले तराईका चेलीहरुलाई नुहाउँछ । हो, सबै नेपाली चेलीहरुलाई झरना कै पानीले नुहाउँछ । युगौँ युगदेखि झरिरहेका झरनाहरुले नुहाउँछन् नेपाली चेलीहरुलाई । अनि त नेपाली चेलीहरुको सौन्दर्यको बयान विश्वभरि हुने गर्दछन् । नेपालमा जस्तो प्राकृतिक झरनाहरु कहाँ छन् र ? आहा हाम्रो नेपालमा कति धेरै कुराहरु छन् ती मध्ये झरना पनि एक हो । लहै झरनाले नुहाउँछ नेपाली चेलीलाई ।
कति भाग्यमानी छन् नेपाली चेलीहरु ? उनीहरुलाई बादलले पछ्यौरी ओढाउँछ । बादल र नेपाली चेली एकअर्काका पर्याय हुन् । सेता–सेता निर्मल कञ्चन सुन्दर बादल जस्तै सुन्दर छन् नेपाली चेलीहरु । उनीहरुको सौन्दर्यता निखार्न बादल टुप्लुक्कै आइपुग्छ अनि ओढाउँछ पछ्यौरी । नेपाली चेली अनि पछ्यौरी यो त एकअर्का छुट्नै नसक्ने कुरा हुन् । नेपाली पछ्यौरी विश्वभरि चर्चित छ । ढाकाका हुन् पस्मिनाका जुनकुनै रुपमा हुन् नेपाली पछ्यौरी प्रसिद्ध छ विश्वमा ।
अनि नेपाली चेलीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान हिँडिरहन नै पर्दैन । किनकि उनीहरुलाई बतासले उडाएर चाहेको ठाउँमा लगिदिन्छ । बतास नेपाली चेलीहरुको साथी हो । नेपाली चेलीहरुको मनको भावना र बह बुझ्दछ बतासले । नेपाली चेलीहरुको सन्देश चाहेको ठाउँमा चाहेका मान्छे कहाँ लगिदिन्छ बतासले । पवन या हावा या बतास या समीर उस्तै–उस्तै हुन् । यिनीहरु सबै नेपाली चेलीहरुका मित्र हुन् । हो, बतासले उडाउँछ नेपाली चेलीहरुलाई ।
गोरी–गोरी पहाडकी छोरी, तराईकी छोेरी अनि हिमालकी छोरी नेपाली चेलीहरु । उनीहरुलाई शीरबन्दीले चिनाउँछ । शीरबन्दी यस्तो कलात्मक गहना हो जो नेपाली चेलीहरुले मात्र लाउँदछन् । नेपालीपनका कलायुक्त शीरबन्दी शीरमा टक्क अड्याएपछि उनीहरुको सौन्दर्यताको निखारता भनिसाध्य हुन्न । घाम, जुन, तारा, आकाश र बादलहरु पनि हेरेकोहेरै हुन्छन् । हो नेपाली चेलीहरुलाई शीरबन्दीले हदैसम्म सुहाउँछ । शीरबन्दी र अरु नेपाली मौलिक गहनाले बिछट्टै सुहाउँछ नेपाली चेलीहरुलाई । नेपाली मौलिक गहनाहरुका दाँजोमा विश्वमा पाइने अरु गहनाहरु फिक्का फिक्का लाग्दछन् । शीरबन्दीले सुहाउँछ नेपाली चेलीहरुलाई ।
नेपाली चेलीहरुलाई चौबन्दीले सुहाउँछ । विश्वमै मौलिक छ नेपालका चेलीहरुले लगाउने चौबन्दी चोली । नेपाली भनेर चिनाउन चौबन्दी चोली लगाए पुग्छ, अर्को परिचय चाहिँदैन । चौबन्दी, सारी, पटुकी अनि पछ्यौरी या मजेत्रो, यति लगाएपछि त विश्वमा अर्को सुन्दरताले भरिएका पहिरन पाउन मुस्किल हुन्छ । हो, चौबन्दीले सुहाउँछ नेपाली चेलीहरुलाई । चौबन्दीले चिनाउँछ नेपाली चेलीहरुलाई ।
पीर दिन आउनेलाई पूmल टिपी दिउँला भन्छिन् नेपाली चेलीहरु । नेपाली चेलीहरु जस्ता मित्रवत अरु कोही हुन्नन् । बैगुनीलाई गुनले रिझाउँन सिपालु छन् नेपाली चेलीहरु । अनि भन्छन् नेपाली चेलीहरु, उज्यालो नदेख्नेलाई घाम मागि दिउँला, कर्म सम्झी रुनेलाई आँशु पुछि दिउँला । मन मिल्ने साथीलाई ज्यानै पनि दिउँला । नेपाली चेलीहरुको मिलनसारिता र सहयोगी मन भनिसाध्य छैन । कष्टकर जीवन बिताउन बाध्यहरुलाई सहयोग गर्दछन् नेपाली चेलीहरु, दुःखीहरुलाई मन र धनले सहयोग गरी आँशु पुछिदिन्छन् । मन मिल्ने साथीहरुलाई अभरमा ज्यानै जोखिममा परे पनि उद्धार गर्दछन् । महान् गुणका छन् नेपाली चेलीहरु । अनि त नेपाली चेलीहरुलाई वनपाखा डुलिहिँड्ने डाँफे मुनालहरु पनि खोज्न आउँदछन् । चराचर जगतसम्मलाई थाहा छ नेपाली चेलीहरुको असल गुणहरु ।
चरीसँगै डाली डाली मन खोली घुम्दछन् नेपाली चेलीहरु । मान्छेको भाषा नबुझ्ने चराचुरुङ्गी समेतले नेपाली चेलीहरुको मनको भाषा बुझ्दछन् । नेपाली चेलीहरु सँगसँगै वनपाखा, खुल्ला चउरमा अनि रुखका डाली डाली घुम्दछन् । अनि खहरेको पानीले चैते मन भिजाउँदछन् । चैतको उखरमौलो गर्मी भएर के भो त ? नेपाली चेलीहरुका लागि खहरेहरुले चिसो पानीको मुल फुटाएर बहाइदिन्छन् । नेपाली चेलीहरुका लागि प्रकृति पनि साथीसँगी बनिदिन्छ ।
संगीनीको भाका गाउँदै गाउँबेँसीमा रमाउँछन् नेपाली चेलीहरु । गाउँ, बस्तीका लागि गहना बन्छन् नेपाली चेलीहरु । अनि नाच्छन् चुरा बजाइ छमछम सोरेठीमा । नेपाली चेलीले नै नेपाली मौलिक गीत संगीत, कला चलन र परम्पराहरु जगेर्ना गरिल्याएका छन् । संगिनी, सोरेठी, नेपाली संस्कृति अनि नेपाली चेलीहरु एकअर्काका पर्याय हुन् । गाउँ, बेँसी, बस्ती अनि समाजमा उमङ्ग र खुशीयालीको वातावरण बनाउँदछन् । उनीहरुले धेरै धेरै नेपाली मौलिकता साँचेर ल्याएका छन् । नेपाली चेलीहरुले यसो नगरिदिँदा हुन् त धेरै कुरा उराठ लाग्दा र अधुरा हुन्छन् ।
तराईका मैदान या चउरमा किन नहोस् या पहाड या हिमालका सैंलुङटारमा थापिएका लिङ्गेपिङ्गमा चचहँुई गर्दै मच्चिन्छन् नेपाली चेलीहरु । लिङ्गेपिङ्गको कल्पना र रचना नेपाली चेलीहरुले नै गरेका हुन् र उनीहरुले नेपालीहरुलाई मात्र होइन संसारलाई लिङ्गेपिङ्ग जस्तो मौलिक खेल उपहार दिएका छन् । दशैँ, तिहार, ल्होक्षार हुन् या अन्य कुनै चाड या मेला या जात्रा या उत्सवमा लिङ्गेपिङ्ग नभए त्यसको रौनकता खल्लो खल्लो हुन्छ । लिङ्गेपिङ्ग हुन् या रोटेपिङ्ग मच्चाउन र मच्चिन या झुलाउन नेपाली चेलीहरुलाई कसैले सिकाउन पर्दैन । चर्चित गायीका डेजी बराईलीको स्वरमा रहेको ‘लहै मलाई गुराँसले सुहाउँछ’ बोलको गीतको भावले यीनै महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छन् ।
कति धनी छ नेपाली परम्परा ? नेपाली चेलीहरुले थामिल्याएका मौलिक परम्परा नहुँदा हुन् त नेपाल मात्र होइन विश्व नै खल्लो खल्लो हुने थियो । तर, भाग्यवश, विश्वको गहना नेपाल, नेपाली परम्परा, कला र सम्पदा छन् अनि छन् देशै अनि संसारै सुन्दर र उज्यायो पार्ने नेपाली चेलीहरु । गुराँसले सुहाउँछ नेपाली चेलीहरुलाई, अनि सुहाउँछ तराई, पहाड र हिमालकी छोरी नेपाली चेलीहरुलाई शीरबन्दी र चौबन्दीले ।
Previous articleगाउँगाउँ पुगेर बङ्गुरपालनको व्यावसायिक प्रशिक्षण
Next articleमृगौला पीडित दुई शिक्षकलाई सहयोग